Sawirro: Wadada isku xirta muqdisho iyo jowhar oo markii ugu horeysay dayactir xoogan lagu sameynaayo | BanaadirTimes.com
Sawirro: Wadada isku xirta muqdisho iyo jowhar oo markii ugu horeysay dayactir xoogan lagu sameynaayo
Madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Xuseen iyo Wasiiru Dowlaha Maaliyada Dowlada Federalka Soomaaliya Mudane Maxamuud Xayir Ibraahin ayaa si wadajir ah u dhagax dhigay dayactir lagu sameynayo wadada isku xirta magaalada Jowhar iyo Muqdisho.
Munaasabada lagu dhagax dhigayay dayactir lagu sameynayo wadada isku xirta magaalada Jowhar iyodeeganka koongo oo lagu qabtay magaalada Jowhar ayaa waxaa ka soo qeybgalay Wasiiro,wasiir ku xigeeno, xildhibaano, maamulka gobolka Sh/dhexe iyo Engneero dhismaha wadooyinka ah.
Wadada la dhagax dhigay ayaa ah qeybta koowaad ee dayactir lagu sameynayo wadada isku xirta magaalada Jowhar iyo Muqdisho waxaana qorshaha koowaad uu yahay in la dayactiro illaa 5km iyadoo howsha dayactirkana ay socon doonto muddo 4 bilood ah.
Guddoomiyaha gobolka Sh/dhexe Axmed Meyre Makaraan ayaa soo dhoweeyay bilowga dayactirka maadaama shacabka ay dhibaato ku qabaan isagoo u mahadceliyay dowlada federalka Soomaaliya.
“Wadadan waxbadan ayay u tari doontaa dadka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Sh/dhexe waxaana dhagax dhigan tusaale u yahay in ummada Soomaaliyeed ay ka shaqeynayaan horumar halka dad badan ay ka hadlaan gaajo iyo macluul taasina waxa ay muujinaysaa in dowladeenu hore u socoto maamul goboleeyaduna dhismayaan.”ayuu yiri Wasiiru Dowlaha Maaliyada Dowlada Federalka Soomaaliya.
“Dowlad Goboleedka Hirshabeele baahi weyn ayay u qabtaa in wadooyinka wax laga qabto waayo dhibaato ayay ku tahay shacabka isu socodka wadooyinka oo burbursan awgeed.”ayuu sii raaciyay Madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle.